Kedu ihe bụ njehie 404? Gịnị Mere Ha Ji Dị Oké Mkpa? | Martech Zone
Mgbe ị rịọrọ maka adreesị na ihe nchọgharị, usoro ihe omume na-eme n'okwu nke microseconds:
Type pịnyere adreesị na http ma ọ bụ https na kụrụ tinye.
The http na-anọchi anya hypertext mbufe protocol na-agagharị na ngalaba aha ihe nkesa na-. Https bụ njikọ dị nchebe ebe onye nnabata na ihe nchọgharị na-eme aka na izipu ozi ezoro ezo.
Ngalaba aha ihe nkesa na-ele anya ebe ngalaba na-atụ aka.
A rịọrọ arịrịọ ahụ maka onye na-elekọta weebụsaịtị.
Peeji ahu choro n'aka onye nwe ya.
Ọ bụrụ na onye nnabata ahụ nwere usoro njikwa ọdịnaya (CMS), a na-agagharị arịrịọ ahụ site na nchekwa data ma na-ele anya na peeji ahụ ma gbochie ya. Ọ bụrụ na ọ bụ saịtị na-agbanwe agbanwe, a na-ahụ ma gosipụta peeji ahụ.
N'ọnọdụ ọ bụla, webserver na-aza koodu… 200 bụ ezigbo peeji egosipụtara na-enweghị nsogbu dị n'ime, yana a 404 bụ njehie na-agwa onye nnata na ahụghị ibe ahụ na sava. (Enwere ọtụtụ koodu ndị ọzọ na - akọwapụta nsogbu ndị ọzọ… mana anyị na - arapara na njehie 404 ebe a).
Anyị edeela ihe dị ntakịrị banyere peeji 404 n'ihi na ha na-abụkarị ndị ụlọ ọrụ na-echebara echiche - mana ha na-emetụta ha abụọ ike ịkwado nke ọma na engines ọchụchọ yana ịbụ onye na-ewute ndị ọrụ were oge iji pịa-site na saịtị gị.
Gịnị Na-eweta Njehie 404?
Enwere ọtụtụ ihe kpatara na saịtị gị nwere ike iwepụta njehie 404:
Changed gbanwere usoro URL gị ma ọ bụ megharịa saịtị gị ma megharịa peeji niile. N'okwu a, ị ga-edegharị peeji ndị a iji melite engines ọchụchọ ma nye nnukwu ahụmịhe ọrụ.
Wepụrụ otu ibe na saịtị gị nke na-abaghị uru. N'okwu a, m ga-akwado ịkwugharị gaa na peeji nke dị adị ma dị mkpa. Ọ bụrụ na ibe ahụ nwere backlinks na weebụ, nke ahụ ga-eme ka ikike nke ibe ọhụrụ ahụ dị na ọkwa ọchụchọ gị.
Enwere ndị na-agba ọsọ, bọọlụ, na ederede nke na-ele anya maka ngwangwa, peeji ndị amaara na sistemụ ọdịnaya nwere ike inye ha ụzọ azụ na saịtị gị. Nwere ike ileghara nleba anya ndị a anya… mana ọ bụ ezigbo echiche ịdebe CMS gị yana plugins ruo ụbọchị iji zere ịbanye.
Onye nwere ike jikọta na saịtị gị mana jiri URL na-ezighi ezi na njikọ ha. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịme ka ha melite njikọ ahụ, tinye ntụgharị ka ị mezie ahụmịhe ojiji ma jigide ikike ọchụchọ ahụ.
Ihe omuma nke di n'okpuru na-enyekwa otutu oru - tinyere Frog Fream, Ahrefs, na SEMRush si ngwaọrụ maka ichota njikọ dị n'etiti saịtị gị nke ga - ewepụta peeji njehie 404. Agbanyeghị, a ga m akwado gị ka ị nyochaa njikọ ndị mepụtara na mpụga. Nwere ike ime nke ahụ Njikwa Nchọta Google na nchịkọta Google.
Ndụmọdụ Ndụmọdụ: Gụọ edemede m gbasara etu esi eji Nchịkọta Google iji zitere gị akụkọ na peeji njehie 404 ebe ị nwere ike ịmata mmalite nke ibe ọjọọ, hazie akụkọ kwa izu ma ọ bụ kwa ọnwa, wee rụọ ọrụ iji tinye ihe ngwọta kachasị mma.
Etu esi edozi njehie 404
N'ọnọdụ ọ bụla… mgbe ọ bụ njin ọchụchọ ma ọ bụ onye ọrụ, ị kwesịrị ị na-emegharị nchọgharị gị ma ọ bụ onye ọbịa iji nye ahụmịhe onye ọrụ na-enweghị atụ yana ịchekwa ikike gị na backlink. Dị ka infographic dị n'okpuru na-egosipụta, ị nwere ike ime nke a site na:
Ntugharị peeji njehie 404 gaa na peeji ọzọ dị mkpa.
Weghachi ihu efu efu
Gbazi njikọ dị na saịtị gị ma ọ bụ na mpụga. Mgbe ụfọdụ ọ na-esiri mmadụ ike imelite njikọ ha na saịtị ndị ọzọ… mana ọ bara uru gbaa!
Gụọ SEO Sherpa's 404 Error Page Ultimate Guide
Nke a bụ animated infographic si SEO Sherpa nke ahụ na-agagharị gị site na isi nke njehie 404.
Tags: 301301 redirect404Njehie nje 404404 ahụghịnsịhttphttpsahụghịna-atụgharịọdịnaya dị mkpaAseo ezicraw saịtị